မြမြ ဆိုသူ၏ ဝိဥာဉ်​ဝင်​ပူးပြီး ​ပြောဆိုသည့်​ လူသတ်​ မုဒိမ်း အ​လောင်း​ဖျောက်​မှု အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူး ပြောပြီ...! - Thadin
HomeNEWSမြမြ ဆိုသူ၏ ဝိဥာဉ်​ဝင်​ပူးပြီး ​ပြောဆိုသည့်​ လူသတ်​ မုဒိမ်း အ​လောင်း​ဖျောက်​မှု အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူး ပြောပြီ…!
April 23, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on မြမြ ဆိုသူ၏ ဝိဥာဉ်​ဝင်​ပူးပြီး ​ပြောဆိုသည့်​ လူသတ်​ မုဒိမ်း အ​လောင်း​ဖျောက်​မှု အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူး ပြောပြီ…!
​တောင်​ဒဂုံမြိုနယ်​ ၁၀၇ ရပ်​ကွက်​အတွင်​ နှစ်​ဆန်းတစ်​ရက်​​နေ့က မြမြဆိုသူ၏ ဝိဥာဉ်ဝင်​​ရောက်​ပူးကပ်​​ပြောဆိုခဲ့သည့်​ သူသတ်​ မုဒိမ်းအ​လောင်း​ဖျောက်​မှုသည်​ မဟုတ်​မှန်​​ကြောင်း ​၁၀၇ ရပ်​ကွက်​အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူး က​ပြောသည်​။
“ရာအိမ်​မှူးက လှမ်းသတင်းပို့​တော့ ကိုယ်​​တွေကိုယ်​တိုင်​လိုက်​ရှာတယ်​ စခန်းမှူးလည်းလှမ်​အ​ကြောင်းကြားလိုက်တယ်​။ပထမပတ်​ဝန်းကျင်​က လူ​တွေနဲ့ရာအိမ်​မှူးဆယ်​အိမ်​မှူး​တွေနဲ့လိုက်​ရှာတယ်။​ဘာမှမ​တွေ့ရဘူး။၁၀နာရီ​လောက်​မှ စခန်းမှူးတို့အဖွဲ့​ရောက်​လာတယ်။​
မီးမလင်းတဲ့မှတ်​တိုင်​​တွေကို​သေချာမှတ်​သားပြီး​တော့ရှာတယ်။ ​မ​တွေ့ဘူး။​သေတာကြာပြီဆိုရင်​ အပုတ်​နံထွက်​ရမယ်။​ အပုတ်​နံလည်းမရဘူး။ဒီ​နေ့​ကျောက်​စိမ်းစက်​ရုံကို ကျွန်​​တော်​တို့ရယ်​ စခန်းမှူးရယ်​သွားပြီး လူစာရင်းစစ်​​ဆေးတယ်။​
မြမြဆိုတဲ့သူ နာမည်​မ​တွေ့ရဘူး။ အခုကျွန်​​တော်​တို့ဒီကိစ္စမဟုတ်​မှန်​​ကြောင်း မြို့နယ်​ကိုတင်ထားပြီ”ဟု ၁၀၇ရပ်​ကွက်​အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးက​ပြောသည်​။
၁၀၇ ရပ်​ကွက်​အတွင်း နှစ်​ဆန်းတစ်​​ရက်​​နေ့တွင်​ ပရိတ်​တရားနာစဉ်​ မဇာခြည်​လွင်​ဆိုသူအား ရုတ်​တရက် ​မြမြဆိုသည့်​ ဝိဥာဉ်​ဝင်​ပူး၍ ၄င်းအား သင်္ကြန်​အကြို​နေ့တွင်​ လည်​ပြီးပြန်​လာစဉ်​ Sweety Home စက်​ရုံမှ အမျိုးသားလုပ်​သား၃ဦးမှ အတင်းဆွဲ​ခေါ်၍မုဒ်ိန်းကျင့်​ခဲ့ပြီး
ဓားများဖြင့်​ခုတ်​ထစ်​ကာ အ​​လောင်းအား ​မီမလင်းသည့်​ဓာတ်​တိုင်​ခြုံပုတ်​နားရှိ ​မြောင်း၏သုံ​ပေ​နေရာတွင်​မြုပ်​ထားသည်​ဟု ​ပြောဆိုခဲ့သည်​။
The Fifth Wave News..
​တောငျ​ဒဂုံမွိုနယျ​ ၁၀၇ ရပျ​ကှကျ​အတှငျ​ နှဈ​ဆနျးတဈ​ရကျ​​နကေ့ မွမွဆိုသူ၏ ဝိဉာဉျဝငျ​​ရောကျ​ပူးကပျ​​ပွောဆိုခဲ့သညျ့​ သူသတျ​ မုဒိမျးအ​လောငျး​ဖြောကျ​မှုသညျ​ မဟုတျ​မှနျ​​ကွောငျး ​၁၀၇ ရပျ​ကှကျ​အုပျ​ခြုပျ​​ရေးမှူး က​ပွောသညျ​။
“ရာအိမျ​မှူးက လှမျးသတငျးပို့​တော့ ကိုယျ​​တှကေိုယျ​တိုငျ​လိုကျ​ရှာတယျ​ စခနျးမှူးလညျးလှမျ​အ​ကွောငျးကွားလိုကျတယျ​။ပထမပတျ​ဝနျးကငျြ​က လူ​တှနေဲ့ရာအိမျ​မှူးဆယျ​အိမျ​မှူး​တှနေဲ့လိုကျ​ရှာတယျ။​ဘာမှမ​တှရေ့ဘူး။၁၀နာရီ​လောကျ​မှ စခနျးမှူးတို့အဖှဲ့​ရောကျ​လာတယျ။​
မီးမလငျးတဲ့မှတျ​တိုငျ​​တှကေို​သခြောမှတျ​သားပွီး​တော့ရှာတယျ။ ​မ​တှဘေူ့း။​သတောကွာပွီဆိုရငျ​ အပုတျ​နံထှကျ​ရမယျ။​ အပုတျ​နံလညျးမရဘူး။ဒီ​နေ့​ကြောကျ​စိမျးစကျ​ရုံကို ကြှနျ​​တျော​တို့ရယျ​ စခနျးမှူးရယျ​သှားပွီး လူစာရငျးစဈ​​ဆေးတယျ။​
မွမွဆိုတဲ့သူ နာမညျ​မ​တှရေ့ဘူး။ အခုကြှနျ​​တျော​တို့ဒီကိစ်စမဟုတျ​မှနျ​​ကွောငျး မွို့နယျ​ကိုတငျထားပွီ”ဟု ၁၀၇ရပျ​ကှကျ​အုပျ​ခြုပျ​​ရေးမှူးက​ပွောသညျ​။
၁၀၇ ရပျ​ကှကျ​အတှငျး နှဈ​ဆနျးတဈ​​ရကျ​​နတှေ့ငျ​ ပရိတျ​တရားနာစဉျ​ မဇာခွညျ​လှငျ​ဆိုသူအား ရုတျ​တရကျ ​မွမွဆိုသညျ့​ ဝိဉာဉျ​ဝငျ​ပူး၍ ၄ငျးအား သင်ျကွနျ​အကွို​နတှေ့ငျ​ လညျ​ပွီးပွနျ​လာစဉျ​ Sweety Home စကျ​ရုံမှ အမြိုးသားလုပျ​သား၃ဦးမှ အတငျးဆှဲ​ချေါ၍မုဒျိနျးကငျြ့​ခဲ့ပွီး
ဓားမြားဖွငျ့​ခုတျ​ထဈ​ကာ အ​​လောငျးအား ​မီမလငျးသညျ့​ဓာတျ​တိုငျ​ခွုံပုတျ​နားရှိ ​မွောငျး၏သုံ​ပေ​နရောတှငျ​မွုပျ​ထားသညျ​ဟု ​ပွောဆိုခဲ့သညျ​။
မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား ၁ ဂရန်ကို ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန်တဲ့ ဗန်ဒါရွက်ရဲ့ သဘာဝကပေးတဲ့ ဆေး…!
This Month : 40559
This Year : 235957
Total Users : 594981
Total views : 2732534